> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si mbughari Media
Enwere m ike Naghachi ehichapụ faịlụ site na mbughari Media?
M nwere mbughari USB flash mbanye nke-echekwa m ụfọdụ foto ọrụ. O di nwute na m nwa ewu-ezighị ehichapụ ha nile. M nọ na-nyefee ha ka ha kọmputa m. È nwere ụfọdụ ngwọta naghachi m ehichapụ foto site na ya? Ekele.
Mbughari media ọzọ bụ na ihe ọtụtụ ebe e ji maka data nchekwa n'oge. Otú ọ dị, data na mbughari media nwere ike ga-efu ruru nhichapụ, formatting, virus ọrịa ma ọ bụ ọbụna usoro njehie. Mgbe faịlụ na-efu si mbughari media, ha na-agaghị n'ezie okụrede. Ha na-akara dị ka keerughi data na a ga-eche ọhụrụ data ka overwrite ha. Nke a pụtara na gị nwere ike omume naghachi data si mbughari media dị ka ogologo oge data na-adịghị overwritten.
Naghachi data si mbughari media, ị ga-mma kwụsị iji ya na anya n'ihi na a mbughari media data mgbake omume na-enyere gị aka. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac dị otú ahụ a ngwá ọrụ na-enyere gị aka naghachi data si nile di iche iche nke mbughari media, gụnyere mpụga ike mbanye, USB mbanye, kaadị ebe nchekwa, wdg na ya, i nwere ike effortlessly weghachite faịlụ dị ka oyiyi, videos, akwụkwọ faịlụ, ọdịyo faịlụ na ndị ọzọ si gị mbughari nchekwa na ngwaọrụ.
Get a ikpe mbipute naghachi data si mbughari media ugbu a!
Igosi mbughari Media Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
Anyị ga-eme mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Na tupu anyị enweta ya malitere, biko hụ na gị na mbughari mgbasa ozi nwere ike-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite mbughari media data mgbake
Malite Wondershare Data Recovery na kọmputa gị na ị ga-ahụ ihe interface dị ka foto dị n'okpuru ebe na-egosi.
Ebe i nwere ike na-"Echefuola File Iweghachite" mode dị ka a na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị mbughari media anya n'ihi na furu efu faịlụ
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa họrọ gị mbughari media na pịa "Malite" button ka usoro ihe omume ike iṅomi ya.
Ọ bụrụ na faịlụ gị mbughari media furu n'ihi formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site mbughari Media
Mgbe scanning, niile scanned ọdịnaya na gị mbughari mgbasa ozi ga-egosipụta na "File Pịnye" ma ọ bụ "ụzọ" edemede. Ị nwere ike ele faịlụ aha elele ma gị furu efu data nwere ike natara ma ọ bụ. Ị ga-enwe ike ihuchalu hụrụ oyiyi kwa.
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Iji gbochie recoverable faịlụ site na-overwritten, biko adịghị azọpụta ha azụ gị mbughari media n'oge mgbake.
Naghachi Lost Data on Mac OS X El Capitan
PNY Attache Iweghachite: Nzọụkwụ naghachi Lost Data si PNY Attache Flash Drive
Nexus 7 Data Recovery: Naghachi Nexus 7 Photos / Videos / Music na ala